မြန်မာနဲ.ထိုင်းဘာလို့ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာခြားနေလဲ ? (သိသင့်လို့ ဖတ်ကြည့်ဗျာ) – ရွှေမြန်မာတို့အတွက် ရွှေမင်္ဂလာ
HomeKnowledgeမြန်မာနဲ.ထိုင်းဘာလို့ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာခြားနေလဲ ? (သိသင့်လို့ ဖတ်ကြည့်ဗျာ)
မြန်မာနဲ.ထိုင်းဘာလို့ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာခြားနေလဲ ? (သိသင့်လို့ ဖတ်ကြည့်ဗျာ)
December 6, 2017 sayargyee Knowledge 0
မဲစောက်မြ၀တီ ထိုင်းမြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး အခြေအနေသတင်း BBC ကနေ နားထောင်ပြီး ပြည်မြန်မာ အရေးအတွက် ရင်လေးမိတယ်။ BBC တင်ပြချက်သတင်းကို ပြန်ရေးပြပါ့မယ်။
မြ၀တီ မဲစောက် ထိုင်းမြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး အခြေအနေကို မဲစောက်မှ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ကိုအောင်ကျော်ဦးက တင်ပြပေးပါ့မယ်။
မဲစောက် မြ၀တီ ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကနေ အခုရက်ပိုင်းမှာ မြန်မာဘက်ကို စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းတွေ အများကြီး သွားနေတာမို့ မြ၀တီ ခရိုင် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်ကို ကျနော်မေးကြည့်ထားပါတယ်။
“ပဲသမားကလည်း စိုက်ရင် ရှုံးတယ်။ကြက်သွန်နီကလည်း ရှုံးတယ်။ဒီတော့ ကျမတို့ရဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေက ထိုင်းဆီ ရောက်သွားတယ်။
ထိုင်းမှာ သူတို့ ဘာသွားပြန်လုပ်သလဲ။ ပြောင်းစိုက်တယ်။ ပဲစိုက်တယ်။ ငြုပ်သီးစိုက်တယ်။ အခုက ဒူးရင်းသီးလည်း ယိုဒယားပဲ။ သခွါးသီး ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီပန်း အကုန်ပဲ။ သံပုရာသီးကအစ။
ကြက်လည်းဝင်တယ်။ ဘဲဥလည်း ၀င်တယ်။ ကြက်ဥလည်း ၀င်တယ်။ ငါး ပုဇွန်ကြော့လေးတွေကအစ။
ကျွန်မတို့ဘက်က ဘာမှ မထုတ်နိုင်ဘူး။ ကျွနိမတို့ ထုတ်တာနဲ့ ရှုံးတာ။
အဲ့ဒီလို မရှုံးအောင် နည်းပညာနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ကျွနိမတို့ စိုက်ပျိုးရေး အားကောင်းလာမယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲ့ဒီအခါကျရင် သူများတွေဆီကလည်း ၀ယ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ” လို့ ပြောပါတယ်။
“မဲစောက်ဘက်ကနေ မြ၀တီ မြန်မာဘက်ကို သွားနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အခြေအနေတွေကို သိရဖို့ ကျနော်သွားကြည့် ပါအုံးမယ်။
အခုကျနော် မဲစောက်လက်ကား ဈေးကွက်ကို ရောက်တော့ ဒူးရင်းသီးကား အစီး(၂၀)ကျော် သရက်သီးကား(၁၂)စီး နာနတ်သီးကား(၈)စီးအပြင် အသီးအနှံတင်ထားတဲ့ကား(၆)စီးလည်း မြဝတီဘက်ကို ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ မွေးမြူရေးကြက်အရှင်ငါးပုစွန်တွေနဲ့ အေးခဲထားတဲ့ ကြက်သားတွေနဲ့ ကြက်ကလီဇာတွေအပြင် ကြက်ဥ ဘဲဥတွေ တင်ထားတဲ့ ကားတွေပါ စုစုပေါင်း အစီးတစ်ရာကျော် နေ့စဉ်မြန်မာဘက်ကို သွားနေတယိလို့ လက်ကား ကုန်သည်တွေက ကျနော့်ကို ပြောပြပါတယ်။
ဘန်ကောက်ကနေ တိုက်ရိုက် မြန်မာဘက်ကို သွားနေတာတွေက သကြားကားတွေ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဆီနဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ဂတ်စ်ဓါတ်ငွေ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ နှစ်ထပ် ကုန်ကားတွေမှာတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းတွေက သတင်းစာ စက္ကူလိပ်ကြီးတွေ အထည်လိပ်တွေ သားရေတုလိပ်တွေ အပြင် သံပြား သံချောင်း သစ်သားတုတွေ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတွေ များပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် transit ဖြတ်ကျော်ခွင့်နဲ့လာတဲ့ အလှကုန် စားသောက်ကုန်တွေ တင်ထားတဲ့ ကွန်တိန်နာ ကုန်သေတ္တာတွေလည်း အတော်များပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းဘက် ပြန်ဝင်တာက ငြုပ်သီးခြောက် ကြက်သွန်နီ ပဲမျိုးစုံ အာလူးတွေနဲ့ ကျွန်းသစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောက အကြမ်းထည်တွေ တွေ့ရပါတယ်။ နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေ ထိုင်းဘက်ကို ၀င်လာတာက နွား သိုး ကျွဲ ဆိတ် နဲ့ ဓါတ်သတ္တု ကုန်ကြမ်းတွေကို တွေ့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။”
ကဲ အထက်က ကုန်စည် စီးဆင်းမှုကို ကြည့်ရင် မြန်မာတွေ ဘာ့ကြောင့် ဆင်းရဲနေသလဲ ထိုင်းတွေ ဘာ့ကြောင့် ချမ်းသာနေသလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဆီက ဘာမှ မထုတ်လုပ်နိုင်ပါပဲ လိုသမျှ ၀ယ်သုံးနေရတဲ့ အခြေအနေကနေ ပြောင်းနိုင်ပါမှ နိုင်ငံချမ်းသာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေးဝေး ကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ထဲက Super market တစ်ခုခု သွားကြည့်ရုံနဲ့ ပြည်တွင်းထုတ် ဘယ်လောက်ရောင်းပြီး ပြည်ပကုန် ဘယ်လောက်ရောင်းတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။နိုင်ငံ တိုးတက်လာဖို့ နည်းပညာနဲ့ လုံလောက်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ အမြန်ဆုံး လိုနေပါပြီ။
Credit :Kanaung News